Glucose , Sucrose, နဲ့ fructose သူတို့ ၃ မျိုး ဘာကွာလဲ ။ ။ - Hello Sayarwon
ကိုယ်က ဝိတ်ချဖို့လုပ်နေပြီး သကြားလျှော့ဖို့လုပ်နေတဲ့အခါ Sucrose,Glucose နဲ့ fructose ဆိုတဲံ သကြားဓါတ်ပေါင်း ၃ မျိုးအကြောင်း သိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒီ ၃ မျိုးထဲမှာ ဘယ်ဟာက ကျန်းမာရေးကို အထိခိုက်ဆုံးလဲက ပိုအရေးကြီးတာပေါ့။ Sucrose,Glucose နဲ့ fructose တို့ဟာ သကြား ဓါတ်ပေါင်း ၃ မျိုးဖြစ်ပြီး အသီးတွေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ကောက်ပဲသီးနှံတွေမှာ ဒီ သကြားဓါတ်ပေါင်း ၃ မျိုးကို သဘာဝအတိုင်း တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
သူတို့ ၃ မျိုးကိုကွာခြားသွားစေတာကတော့ သူတို့ရဲ့တည်ဆောက်ပုံ၊ ကိုယ်ခန္ဓါက ချေဖျက်ပုံ၊ စုပ်ယူပုံတွေနဲ့ ကျန်းမာရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထပ် သူတို့ တစ်ခုချင်းစီကို အသေးစိတ်တဲ့ လေ့လာမှုတွေနဲ့ ဆက်ကြည့်ရအောင် ။
Sucrose မှာ Glucose ရော Fractose ရော ပေါင်းစပ်ပါဝင်ပါတယ်။
Sucrose ဆိုတာ စားပွဲတင်သကြားရဲ့ သိပ္ပံနာမည်ပါ။ monosaccharides နဲ့disaccharides ဆိုတဲ့ သကြား အုပ်စုကြီး ၂ ခုအောက်မှာ Sucrose က disaccharides အောက်မှာပါပါတယ်။ disaccharides ဆိုတာ monosaccharides နှစ်ခုကိုပေါင်းထားတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် sucrose မှာ glucose မော်လီကျူ ၁လုံးနဲ့ Fractose မော်လီကျူး ၁လုံးဆီပါပါတယ်။
Sucrose က သဘာဝအတိုင်းရတဲ့ ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး သူ့ကို အသီးတွေ ကောက်ပဲသီးနှံတွေ မှာ အများဆုံးတွေ့ရပါတယ်။ သကြားလုံး၊ ရေခဲမုန့်၊ စည်သွပ်အစားအစာနဲ့ ဆိုဒါပါတဲ့ အချိုရည်တွေစတဲ့ တာရှည်ခံအစားအသောက်တွေထဲကို ထည့်သွင်းပြုလုပ်တဲ့ sucrose ကတော့ ကြံတွေက လာတာဖြစ်ပါတယ်။
Sucrose ရဲ့ အရသာကတော့ fructose လောက်မချိုပေမယ့် glucose ထက်တော့ ချိုတဲ့ ဓါတ်ပေါင်းတစ်ခုပါ။
Glucose ကတော့ monosaccharide. ဓါတ်ပေါင်းဖြစ်ပြီး ကိုယ်ခန္ဓါရအတွက် အားအင်တွေဖြည့်ပေးနိုင်ဆုံး အစားအစာတစ်ခုပါ။ monosaccharide ဆိုတာ mono ဆိုတဲ့အတိုင်း ဓါတ်ပေါင်း တစ်မျိုးတည်းပါတာဖြစ်လို အခြား ဓါတ်ပေါင်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီး sucrose and lactose တို့အဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတတ်ပါတယ်။
Sucrose,Glucose နဲ့ fructose ၃ မျိုးထဲမှာ glucose က အချိုဓါတ်ပါဝင်မှု အနည်းဆုံးပါ။
Fructose က အသီးတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရတတ်ပြီး သူက glucose လိုပဲ monosaccharide. ဓါတ်ပေါင်းတစ်ခုပါ။ သူ့ကို အသီးတွေ၊ ပျားရည်တွေ၊ မှာ တွေ့ရတတ်ပြီး တာရှည်ခံအစားအစာတွေမှာတော့ high-fructose corn syrup အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်။ Fractose ဟာ သကြားမုန်လာ၊ ကြံနဲ့ ပြောင်းဖူးတို့က အဓိကရတဲ့ ဓါတ်ပေါင်းတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ သကြား ဓါတ်ပေါင်း ၃ မျိုးထဲက သူက အချိုဆုံး ဖြစ်ပေမယ့် သွေးတွင်းသကြားဓါတ်အပေါ် သက်ရောက်မှု နည်းနည်းလေးပဲ ရှိပါတယ်။
Monosaccharide နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Fructose နဲ့ Glucose တို့ဟာ သွေးထဲကို တိုက်ရိုက်ရောက်သွားနိုင်ပေမယ့် disaccharide ဖြစ်တဲ့ sucrose ကတော့ အရင်ချေဖျက်ခံပြီးမှ သွေးထဲ ဝင်ရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ ၃ မျိုးထဲမှာ ဘယ်တစ်ခုက ကျန်းမာရေးအတွက် အဆိုးဆုံးလဲ ။ ။
အဝလွန်တာ၊ အသည်းအဆီဖုံးတာ၊ ဆီးချို ေရာဂါ စတာတွေနဲ့ ပက်သက်မှု အရှိဆုံးကတော့ Fructose ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Fructose များများစားလေ ဗိုက်ဆာတာကို လှုံ့ဆော်လေလေဖြစ်ပြီး အချိုစွဲတဲ့ ပြဿနာကိုလည်း ရစေတတ်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်က တစ်နေ့ကိုသကြား ပမာဏ ဘယ်လောက်စားရမှာလဲ ။
လူတစ်ယောက်တစ်နေ့ အများဆုံး စားနိုင်တဲ့ သကြားပမာဏက လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၆ ဇွန်း ( ၂၄ ဂရမ်) ပမာဏ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါထက် ပိုစားတဲ့အခါ ကျန်းမာရေးအပေါ် ထိခိုက်နိုင်မှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ် ။ ။